Kpop ရဲ့ အမိမြေဖြစ်တဲ့ Korea မှာတောင် Idol လို့ဆိုလိုက်တာနဲ့ ရုပ်လေးပြစားပြီး Fan တောင်းနေတဲ့သူတွေပါဆိုတဲ့ အတွေးအမြင်မျိုးတွေရှိနေဆဲပါပဲ။
Idol တွေရဲ့ Fandom တွေဘယ်လောက်များများ ၊ ဘယ်လောက်ပဲ World Wide fan တွေ အများကြီးပဲ ပိုင်ဆိုင်ထားပါစေ Idol ဟာ Idol ပါ အဆိုတော်ဆိုတာကတော့အဆိုတော်ပါပဲ ဆိုတဲ့သူတွေလဲ အများကြီးရှိနေပါသေးတယ်။
တကယ်တော့အောင်မြင်တဲ့ Idol တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက် ကြာရှည်လွန်းတဲ့ Trainee ကာလတွေတွေဖြတ်သန်းပြီး အဖက်ဖက်ကပြီးပြည့်စုံပြီဆိုမှ Idol တစ်ယောက်အနေနဲ့ Debut လုပ်ခံရတာပါ။
Idol တစ်ယောက်က သီချင်းဆိုတတ်ရုံ ၊ ကတတ်ရုံ ၊ ရုပ်ချောရုံနဲ့လဲ Idol တစ်ယောက်ဖြစ်မလာသေးပါဖူး။
အဲ့တာကြောင့် Idol တစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့ဆို့ အဖက်အဖက်ကနေပြည့်စုံအောင် Trainee ဘဝကို ဖြတ်သန်းပြီးပြီဆိုမှ Idol တစ်ယောက်အနေနဲ့ဖြစ်ခွင့် ရကြတာဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်လို့ Debut လုပ်နိုင်ခဲ့ဉီးတောင် Idol အနေနဲ့ အောင်မြင်ဖို့အတွက် ဖြတ်ကျော်ရတဲ့ အဆင့်တွေကလဲအများကြီးကျန်ပါသေးတယ်။
အဲ့ဒီတော့ သီချင်းဆိုတာတစ်ခုတည်းတင်မဟုတ်ပဲ အားလုံးကို အာရုံစိုက်ပြီးလုပ်နေရတော့ သီချင်းဖက်တွေမှာအားနည်းတတ်တာကြောင့် အဆိုတော်ရယ်လို့ မသတ်မှတ်နိုင်သေးတဲ့ Fan တွေလဲ အများသား။
ဒီတစ်ခါမှာတော့ အဲ့ဒီအတွေးအမြင်တွေကို ပြောင်းပြန်လှန်ပြစ်နိုင်ခဲ့ကြတဲ့ Idol တွေအကြောင်းပြောပြပေးချင်ပါတယ်။
ဘယ်Idol အဖွဲ့မှာပဲဖြစ်ဖြစ် အဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးဟာ အဖွဲ့ထဲမှာလဲ ကိုယ့်ရဲ့ Role တစ်ခုနဲ့ ရပ်တည်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ Main vocal ဆို Main vocal ၊ Main Rapper ဆိုလဲ Main Rapper အသီးသီး အဖွဲ့ရဲ့ Role ကို တာဝန်ယူထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအတိုင်းအတာအထိအောင်မြင်လာပြီးမှတော့ ဒီလိုဖြစ်ထိုက်တဲ့ အရည်အချင်းတွေပိုင်ဆိုင်ထားလို့ အောင်မြင်လာကြတယ် ဆိုတာသံသယဖြစ်စရာတော့မရှိဘူးလို့ထင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အားလုံးပဲသိကြတဲ့အတိုင်း Idol Group တစ်ခုမှာ အဖွဲ့ ဝင် ၄ ယောက်ကနေ အများဆုံး ၁၃/၁၄ လောက်အထိရှိတတ်ပါတယ်။ တစ်ပုဒ်ကို ၃မိနစ် ၄ မိနစ်လောက်ပဲ ရှိတဲ့ သီချင်းကို အားလုံးကမျှဆိုရသလိုမျိုးဖြစ်နေတော့ တစ်ခါတစ်လေမှာ Idol တွေရဲ့ အရည်အချင်းအပြည့်အဝကိုမမြင်လိုက်ရတာတွေလဲရှိတတ်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ Fan တွေထင်တာလဲ ထင်ချင်စရာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် သူတို့တွေရဲ့ ဒီသီချင်းတွေကိုသာနားထောင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ Idol တွေဟာလဲ အနုပညာကိုမြတ်နိုးတဲ့ အနုပညာရှင်ရယ်လို့ ခေါ်ထိုက်သူတွေပါဆိုတာကို လက်ခံလာမှာသေချာပါတယ်။
ပထမဉီးဆုံးအနေနဲ့ Idol တွေသာမက မထင်မှတ်ထားတဲ့ သူတွေဆီကပါ ကြည့်ရှု့သူတွေနဲ့ အနုပညာရှင်တွေကိုကော အံ့သြမင်သက် အောင်လုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Mystery Music Show: King of Mask Singer မှာဆိုရင်တော့ အဲ့လိုသြချရလောက်တဲ့ အဖြစ်မျိုးကို အများဆုံးတွေ့မြင်ရမယ်ထင်ပါတယ်။ Mystery Music Show: King of Mask Singer ဆိုတာကတော့ တစ်ကိုယ်လုံးကို ဘယ်သူမှန်း မခန့်မှန်းနိုင်အောင် ရုပ်ဖျက်ပေးထားပြီး Mask တွေအပြည့်အုပ်ထားပြီး သီချင်းဆိုပြိုင်ရတဲ့ အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးက အသံကိုပဲနားထောင်ပြီး ဘယ်သူပါဆိုပြီး ခန့်မှန်းပြီးတော့ အဆုံးမှာမှ ဘယ်သူပါဆိုပြီး တွေ့မြင်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့ဒီထဲကမှ ပရိတ်တွေမထင်ထားလောက်အောင်အဲ့သြခဲ့ကြပြီး “ Idol ကဘာလို့အဲ့လောက်တောင် သီချင်းဆိုတတ်ရတာလဲ “ ဆိုပြီး ပြောယူရသည်ထိ အံ့သြအောင်လုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့ Idol တွေအကြောင်းကိုပြောပြလိုက်ရပါတယ် ……
Kpop လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ Exo ကတော့ ချန်ထားလို့မရတဲ့ Global Idol Group တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Exo ရဲ့ Main Vocal ဖြစ်တဲ့ Chen ဟာလဲ Mystery Music Show: King of Mask Singer အစီအစဉ်မှာ ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ Chen သီဆိုနေတဲ့အချိန်မှာ Panel အားလုံးက Idol လုံးမဟုတ်နိုင်ဖူး သေချာတယ်လို့ ကောက်ချက်ချ ပြောနေပေမယ့် Mask ကိုချွတ်ပြီး EXO ရဲ့ Chen လို့ဆိုလိုက်တာနဲ့ အားလုံးဟာ အံ့သြမင်သက်သွားကြပြီး “ တကယ်ပဲ EXO ကတော့ EXO ပါပဲ” ဆိုပြီး ချီးကျူးရသည်ထိ အားလုံးဟာ မယုံနိုင်အောင်ဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ပြီးတော့ Dynamic Duo နဲ့ CHEN တို့ ရဲ့ Collaboration သီချင်းဖြစ်တဲ့ Nosedive ဟာအခုဆိုရင်လဲ Best Rap/Hiphop Melon Music Awards 2017 ဆုကိုရရှိတဲ့အပြင် K Drama လို့ပြောရင် ချန်ထားလို့မရတဲ့ Descendants of The Sun ရဲ့ OST ဖြစ်တဲ့ Chen X Punch တို့သီဆိုထားတဲ့ Everytime ဟာဆိုရင်လဲ ဝက်ဝက်ကွဲ အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ သီချင်းလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။ Chen ရဲ့ အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ OST တွေအများကြီးရှိတာဆိုတော့ အချိန်ရရင်တော့ ဖော်ပြပေးပါဉီးမယ်နော် အခုလောလောဆယ်တော့ ဒီလောက်ပဲဖော်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်။
Chen X Punch ( Every Time – Descendants of The Sun )
Dynamic Duo&CHEN ( nosedive )
Chen – Drunken Truth ( King of mask Singer )
B1A4 ရဲ့ Main Vocal ဖြစ်တဲ့ Sandeul လည်းပဲ Mystery Music Show: King of Mask Singer အစီအစဉ်မှာ ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ MC က Idol လားဆိုတော့ အားလုံးက Idol တော့လုံးဝမဟုတ်ဖူးလို့ ဆိုခဲ့ကြပေမယ့် B1A4 ရဲ့ Sandeul လဲဆိုရောအားလုံး က” ဒီလိုမျိုး Idol တစ်ယောက်က ဒီလောက်ထိ သီချင်းဆိုကောင်းလိမ့်လို့ မထင်မိပါဖူး ဒီအစီအစဉ် က အရမ်းကိုကောင်းလွန်းတဲ့အစီအစဉ်ပါ“လို့ဆိုပြီး တအံ့တသြဆိုခဲ့ကြပါတယ်။
B1A4 Sandeul ( Stigma – King of Masked Singer )
BTS လို့ဆိုလိုက်တာနဲ့ World Wide Fan တွေရဲ့ အားပေးခံရမှုအများဆုံး Kpop Idol Group ဖြစ်တဲ့အပြင် DNA ဟာဆိုရင်ရင် most view Kpop song all the time ဖြစ်တဲ့သီချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ထိအောင်မြင်ပါနေတဲ့အပြင် BTS ရဲ့ Manae လေးJungkook လဲ Mystery Music Show: King of Mask Singer အစီအစဉ်မှာပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ အဖွဲ့ဝင်တွေထဲမှာ အသက်အငယ်ဆုံးဆိုပေမယ့် Main Vocal ဆိုတဲ့ Role ကိုယူထားရတဲ့ Jungkook တစ်ယောက် BTS ဆိုတာကို သက်သေပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Panel တစ်ယောက်ကဆို BTS ရဲ့ Main Vocal Jungkook လဲဆိုရော “ဘာလို့ Idol တွေကဒီလောက်အထိကောင်းရတာလဲ“ ဆိုသည်ထိ Idol တွေရဲ့ Vocal Skill ကို အံ့သြခဲ့ရပါတယ်လို့ ဆိုခဲ့ပြန်ပါတယ်”
Jungkook ( If You -King of Masked Singer )
Bobby လို့ဆိုတာကတော့ အသက် ၁၈ နှစ်နဲ့ Korea ရဲ့ အကြီးဆုံး Hip Hop ပြိုင်ပွဲကြီးဖြစ်တဲ့ Show Me the Money season3ရဲ့ Winner ဖြစ်ခဲ့တဲ့တစ်ဉီးတည်းသော Idol Rapper ဖြစ်ပါတယ်။
ဟုတ်ပါတယ် အသက် ၁၈ နှစ်ပဲရှိသေးတဲ့ Idol Group Ikon ရဲ့ Rapper က ပြိုင်ပွဲဝင်ပေါင်း ထောင်ပေါင်းများစွာပါဝင် ယှဉ်ပြိုင်ကြတဲ့ Korea ရဲ့ အကြီးဆုံး Hip Hop ပြိုင်ပွဲကြီးမှာ ဝင်ပြိုင်တယ်ဆိုတော့ အားလုံးက ပေါ်ပင်လုပ်ကြတယ်ဆိုပြီး Idol Rapper က Rapper အစစ်မဟုတ်ပါဘူး ဆိုတာမျိုးအထိပြောခဲ့ကြပေမယ့် နောက်ဆုံးမှာတော့ Winner ဖြစ်ခဲ့တဲ့ Bobby က Idol တွေဟာလဲ အနုပညာရှင်အဖြစ်ခေါ်ဆိုထိုက်တဲ့ အရည်ချင်းပြည့်ဝတဲ့ သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာ သက်သေပြလိုက်သလိုပါပဲ။ အဲ့တာအပြင် Mystery Music Show: King of Mask Singer အစီအစဉ်မှာပါဝင်ခဲ့ပါသေးတယ်။ ဒီအစီအစဉ်မှာဆိုရင်လဲ အားလုံးကအံ့သြခဲ့ကြရတဲ့ Rapper တစ်ယောက်ရဲ့ Vocal Skill ကိုလဲတွေ့မြင်ကြရမှာပါ။ အားလုံးက “ Rapper ကလဲသီချင်းဆိုတာလဲကောင်းနေရော “ လို့ပြောကြတဲ့အခါ Bobby က “ကျန်တော်က သီချင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင် ဘယ်လိုပုံစံမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုရတာပျော်ပါတယ် အားလုံးက အနုပညာတွေပဲလေလို့လဲပြောပြခဲ့ပါတယ်”
Bobby ရဲ့ Show me the Money3ရဲ့ Winner ဖြစ်စေခဲ့တဲ့ သီချင်းလေးကို ဖော်ပြလိုက်ရပါတယ်။
BOBBY ‘Put Your Guard Up and Bounce’
BOBBY ( My face was not ugly – King of Masked Singer )
Bobby လိုပဲ Show Me the Money season4မှာ ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Show Me the Money season4မှာ ဆိုရင် Season3က တကယ်တော်ပြီး ပြုတ်ကျကျန်နေခဲ့တဲ့ ပြိုင်ပွဲဝင်တွေအများကြီး ပြန်လာပြိုင်ကြတာမို့ ပွဲတော့ကောင်းနေပြီလို့ ပြောနေတဲ့အချိန်မှာပဲ Minho က “Show Me the Money season4ကို ဝင်ပြိုင်တော့ Judge တွေကအစ “Show Me the Money season3winner Bobby က ဒီကနေအရမ်းကိုအောင်မြင်သွားလို့ အားကျလို့ဝင်ပြိုင်တာလား? Winner Minho အဖြစ်အောင်မြင်နေပြီးသားပဲကို ဒီကိုဘာလို့လာပြိုင်ရတာလဲ? လို့မေးတာတွေနဲ့ ပြိုင်ပွဲဝင်တော်တော်များများကလဲ Idol Rapper ပဲလုပ်နေစမ်းပါ? YG အားကိုးနဲ့ လာပြိုင်မှတော့ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် Minho ကလဲ Bobby လိုပဲ winner ဖြစ်သွားဉီးမှာပဲ? လို့ ဆိုတဲ့ မှတ်ချက်တွေကြားမှာ Minho ပြောခဲ့တဲ့ တစ်ခွန်းတည်းသောစကားလေးကတော့ “ ကျွန်တော်ကြိုက်လို့ လာပြိုင်တာပါ “ လို့တစ်ခွန်းထဲပဲပြန်ပြောခဲ့ပြီး သီချင်းစာသားတွေထဲမှာ Minho ကိုရွဲ့ဆိုတဲ့ စာသားတွေပါဝင်ခဲ့ပေမယ့် Minho ကတော့ ‘ အဲ့တာတွေက သူဒီထက်ပိုပြီး ကြိုးစားရမယ်ဆိုတာကို သူ့ကိုသတိပေးသလိုမျိုးဖြစ်နေတာမို့ ပိုကောင်းဖို့တွန်းအားတွေဖြစ်စေပါတယ်လို့ “ ပြုံးပြုံးလေးပဲ ဆိုခဲ့ပါတယ်။ နောက်ဆုံးမှာတော့ Minho က winner မဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် winner up ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။
Minho က Winner ဖြစ်ပြီးသားပဲလေ ? ( Winner- Minho )
Song Minho & ZICO – ′Okey Dokey ‘( Show Me the Money season4)
တကယ်တော့ အရမ်းကိုတော်ကြတဲ့ Idol တွေမှ အများကြီးရှိပါသေးတယ်။ ဒါလေးကတော့ Fan Fan တွေ အားလုံးသိနိုင်မယ်ထင်တဲ့ Idol တွေကိုစုစည်းပြီး ဖော်ပြပေးလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်နော်။
PREVIOUS POST Previous post: Billboard List မှာပါဝင်လာခဲ့တဲ့ ကိုရီးယား Boy Band များ
NEXT POST Next post: သီချင်းများရဲ့နောက်ကွယ်က ရာဇဝင်တွေ (၁)
2 Replies to “Idol ဆိုတာ ရုပ်လေးပြစားနေတယ်ဆိုတဲ့ အမြင်တွေကို ပြောင်းလဲပစ်နိုင်ခဲ့တဲ့ Idol များ!”